တရုတ် 450A အရည်ပျော်အညွှန်း Tester ထုတ်လုပ်သူများနှင့်ပေးသွင်းသူများ - Jiahang တူရိယာများ
နေအိမ် > ထုတ်ကုန်များ > အရည်ပျော်အညွှန်း Tester > 450A အရည်ပျော်အညွှန်းစမ်းသပ်သူအတွက်ရည်စူးသည်
450A အရည်ပျော်အညွှန်းစမ်းသပ်သူအတွက်ရည်စူးသည် ထုတ်လုပ်သူများ
450A အရည်ပျော်အညွှန်းအညွှန်း Tester ကိုအချို့အခြေအနေများတွင် thermoplastics အရည်ပျော်နှုန်းစီးဆင်းမှုကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းနှင့်သုတေသနအတွက်အဓိကအားဖြင့်အသုံးပြုသည်။ thermoplastics အရည်ပျော်နှုန်း (အရည်အညွှန်းညွှန်း) သည်ပလတ်စတစ်ကိုအပူချိန်နှင့်ခံနိုင်ရည်ကိုရည်ညွှန်းသည်၊ MFR (MI) တန်ဖိုးဖြင့်ဖော်ပြထားသော standard die mass မှတဆင့် ၁၀ မိနစ်တိုင်းအရည်ပျော်သည်။ ဝိသေသလက္ခဏာများ။ စမ်းသပ်မှုသည်ကုန်ကြမ်းပစ္စည်းများနှင့် thermoplastics နှင့်ဓာတုဖိုင်ဘာများ၏အရည်အသွေးအာမခံချက်အတွက်အလွန်အရေးပါသည်။ ရှန်ဟိုင်း Jiahang JH-450A JH-450T Melt Index Tester သည် ASTM D 1238 စံနှုန်းနှင့်အညီအပြည့်အ ၀ အရည်ပျော်စေသောအရည်အတွက် PP (polypropylene)၊ polyethylene အတွက်အထူးသင့်တော်သည်။ နှင့်အခြားပစ္စည်းများစမ်းသပ်ခြင်း
450A Melt Index Tester အတွက်အရည်အသွေးစံနှုန်းများအတွက် ရည်စူး၍
5. 450A Melt Index Tester အတွက်ရည်စူးထားသောဗို့အားအားကိုအပြည့်အဝထိန်းညှိပေးနိုင်သော voltage regulating module ဖြင့်အပူပေးသည်။ သမားရိုးကျ solid-state relay on-off control နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်အပူသည်ပိုတည်ငြိမ်ပြီးလျင်မြန်သည်၊ ထို့ကြောင့်ထုပ်ပိုးပြီးပြီးချင်းအပူချိန်ကိုလျင်မြန်စွာပြန်လည်ရရှိစေနိုင်သည်။
6. 450A Melt Index Tester အတွက်စိတ်ကြိုက်လုပ်သောသံချပ်ကာပလက်တီနမ်ခုခံနိုင်သောအပူချိန်အာရုံခံကိရိယာကိုလက်ခံသည်၊ တိကျမှုသည်အမြင့်ဆုံးအဆင့် A ဖြစ်သည်၊ တိကျမှုသည်0.1â within within အတွင်းရှိသည်။ တုန်ခါမှုခုခံမှုနှင့်အလိုအလျောက်ကွေးညွှတ်နိုင်သည်၊ ၀ န်ဆောင်မှုသက်တမ်းပိုရှည်သည်၊ အမြင့်ဆုံးအပူချိန် ၄၅၀ in environment ၌တူရိယာကိုအချိန်ကြာမြင့်စွာအာမခံနိုင်သည်။
အရည်ပျော်အညွှန်းတိုင်းတာသည့်ကိရိယာ JH-450 စီးရီးအရည်ပျော်နှုန်းမီတာကိုအဓိကအခြေအနေအချို့တွင် thermoplastics အရည်ပျော်နှုန်းစီးဆင်းမှုကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းနှင့်သုတေသနအတွက်အဓိကအသုံးပြုသည်။ thermoplastics အရည်ပျော်နှုန်း (အရည်အညွှန်းညွှန်း) သည်ပလတ်စတစ်ကိုအပူချိန်နှင့်ခံနိုင်ရည်ကိုရည်ညွှန်းသည်၊ MFR (MI) တန်ဖိုးဖြင့်ဖော်ပြထားသော standard die mass မှတဆင့် ၁၀ မိနစ်တိုင်းအရည်ပျော်သည်။ ဝိသေသလက္ခဏာများ။ စမ်းသပ်မှုသည်ကုန်ကြမ်းပစ္စည်းများနှင့် thermoplastics နှင့်ဓာတုဖိုင်ဘာများ၏အရည်အသွေးအာမခံမှုအတွက်အလွန်အရေးပါသည်။
အလိုအလျောက်အရည်ပျော်အညွှန်း Tester JH-450 series အရည်ပျော်စီးနှုန်းမီတာကိုအခြေအနေအချို့တွင် thermoplastics အရည်ပျော်နှုန်းစီးဆင်းမှုကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းနှင့်သုတေသနအတွက်အဓိကအသုံးပြုသည်။ thermoplastics အရည်ပျော်နှုန်း (အရည်အညွှန်းညွှန်း) သည်ပလတ်စတစ်ကိုအပူချိန်နှင့်ခံနိုင်ရည်ကိုရည်ညွှန်းသည်၊ MFR (MI) တန်ဖိုးဖြင့်ဖော်ပြထားသော standard die mass မှတဆင့် ၁၀ မိနစ်တိုင်းအရည်ပျော်သည်။ ဝိသေသလက္ခဏာများ။ စမ်းသပ်မှုသည်ကုန်ကြမ်းပစ္စည်းများနှင့် thermoplastics နှင့်ဓာတုဖိုင်ဘာများ၏အရည်အသွေးအာမခံချက်အတွက်အလွန်အရေးပါသည်။
တရုတ်ပြည်မှကျွန်ုပ်တို့၏စက်ရုံမှထုတ်လုပ်သောအဆင့်မြင့် 450A အရည်ပျော်အညွှန်းစမ်းသပ်သူအတွက်ရည်စူးသည် ကိုစျေးသက်သက်သာသာဖြင့် ၀ ယ်နိုင်သည်။ ယုံကြည်စိတ်ချရသောအရည်အသွေးအပြင်ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များတွင် TRAT, ISO9001, CE နှင့်အခြားအသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်များပါ ၀ င်သောကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီသည်တရုတ်တွင်နာမည်ကျော် 450A အရည်ပျော်အညွှန်းစမ်းသပ်သူအတွက်ရည်စူးသည် ထုတ်လုပ်သူများနှင့်ပေးသွင်းသူများထဲမှတစ် ဦး ဖြစ်လာသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏စက်ရုံသို့အဆင့်မြင့်ပြီးအရည်အသွေးမြင့် 450A အရည်ပျော်အညွှန်းစမ်းသပ်သူအတွက်ရည်စူးသည် ကို ၀ ယ်ရန် ၀ မ်းသာပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့ထံမှယုံကြည်စိတ်ချရသောထုတ်ကုန်များ ၀ ယ်ယူရန်စိတ်ချနိုင်ပါသည်။ ဒီထက်ပိုသိချင်ရင်မင်းနဲ့ငါတို့ပူးပေါင်းဖို့မျှော်လင့်တယ်၊ မင်းအခုငါတို့တိုင်ပင်နိုင်တယ်၊ ငါတို့မင်းကိုအချိန်မီပြန်ပြောလိမ့်မယ်။